Olona mihoatra ny paositra, Olombelona amin'ny tànana | Martech Zone
Talata, May 7, 2013 Douglas Karr
HubSpot dia nanolotra Inbox sosialy, rindranasa vaovao iray izay mampifandray ny fanaraha-maso sy famoahana media sosialy miaraka amin'ny tobim-pifandraisana HubSpot, ahafahan'ny mpivarotra mamorona fomba fijery miavaka amin'ny asa sosialy tarihin'izy ireo, ny mpanjifany ary ny evanjelista lehibe indrindra. Ny fampidirana vaovao dia mampihena ny tabataba mifandraika amin'ny fihainoana ny media sosialy, ny fampandrenesana ireo orinasa amin'ireo olona manan-danja mila valiny, ary manome ny toe-javatra ho an'ny fifandraisan'ny media sosialy, manolo ny tetika mahery sy manelingelina amin'ny fitiavan'ny olona marketing.
Tombontsoa lehibe amin'ny fampiharana vaovao dia ahitana:
Fampidirana miaraka amin'ny Database Contact an'ny HubSpot: Ny HubSpot dia hampifanaraka ho azy ny prospect, lead, na ny kaonty Twitter an'ny mpanjifa miorina amin'ny mailaka ary hanangona rakitsoratra feno ny fifandraisan'izy ireo amin'ny orinasanao hatreto, mba hahafahanao manavaka ireo valinteninao amin'ny antsipiriany sy ny toe-javatra fanampiny. Ny Inbox sosialy dia hanisy saina ny bitsika rehetra avy amin'ny olona manana anarana mitovy amin'ny fifandraisana amin'ny angon-drakitrao, mba hahafahanao manohy manangana mombamomba anao.
Fanaraha-maso ny fizarana sy fanairana: Fanamby efa hatry ny ela ho an'ny mpivarotra ny habetsaky ny angon-drakitra tokony hasiana isan'andro. Ny Inbox sosialy dia ahafahan'ny orinasa manandratra haingana ny fizarana haino aman-jery sosialy amin'ny besinimaro, mba hamantarana mora foana ny dingana làlan'ny androm-piainan'ny olona iray ao anatin'ny fitaovan'ny Inbox Social, ary ny fametrahana fampandrenesana miompana amin'ny laharam-pahamehan'ny marikao, manomboka amin'ny sokajy sy ny fanaraha-maso fifaninanana ka fanaraha-maso ireo mari-pamantarana mividy.
Fahombiazana sy fahombiazana mihoatra ny Marketing: Ny firafitra sy ny fampiasana ny Inbox Social dia mahatonga azy io ho mora sy tsy mitombina ho an'ireo mpitantana ny varotra sy ny serivisy mba hitrandrahana ny endrik'ilay rindrambaiko napetraka ihany koa. Manokana, ny fampandrenesana momba ny fampiharana finday dia ahafahan'ny mpitantana varotra mahazo fampandrenesana fanindriana mifototra amin'ny fitanisana ny fitaritana manokana. Ny fampidirana ny Inbox Social miaraka amin'ny fitaovana mailaka an'ny HubSpot dia mamela ny mpiasan'ny serivisy hamaly mivantana ny fanontanian'ny mpanjifa ao amin'ny Twitter miaraka amin'ny mailaka manokana.
Analytics azo ampiharina: Mbola miady amin'ny famaritana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola sosialy ny mpivarotra, fa ny Inbox Social HubSpot dia ahafahan'ny mpivarotra mahita firy ny fitsidihana, fitarihana ary mpanjifa novokarin'ny fantsona media sosialy tsirairay. Ho fanampin'izay, ny mpampiasa dia tsy afaka mahita ny isan'ny tsindry na ny fifanakalozana amin'ny fizarana iray fotsiny, fa koa ny anaran'ny fifandraisana tsirairay izay naneho fahalianana tamin'io bitsika io.
Ny Inbox sosialy dia mahatonga ny media sosialy ho fanatanjahantena ekipa. Ekipa mpanohana dia afaka manara-maso ny fangatahana serivisy amin'ny alàlan'ny mailaka; ny mpivarotra dia afaka manova ny antso ho amin'ny hetsika isaky ny pejy ny fanantenana na ny fitsidihana mitarika mifototra amin'ny toerana misy azy eo amin'ny tsingerin'ny fiainan'ny mpanjifany; ary ny ekipa mpivarotra dia afaka mametraka fitarihana media sosialy amin'ny fampielezan-kevitra fitarihana fitarihana mety. Ankoatry ny maha-manokana azy manokana, ny Social Inbox dia manome fitaovana feno miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny marketing mihoatra ny varotra sy serivisy.
Hampiroborobo ny fandefasana, Hubspot nizara ity sary ity tamin'ny marketing media sosialy.
Tags: hubspotmedia sosialy hubspotboaty media sosialySocial Media Marketingfomba fiasa amin'ny haino aman-jery sosialy
Andro iray eo amin'ny fiainan'ny Internet
May 9, 2013 amin'ny 4: 50 AM
Fitaovana tena tsara avy amin'ny Hubspot, tokony hanandrana an'io ianao ary ho hitanao manokana! Lahatsoratra tsara!